Version 0.7.6 – Hayso on rogid
August 3, 2011 by dalabyo 43 Comments
ILAALI on rogid
Waxaan ku faraxsanahay inaan kuu soo bandhigo dhan la noo cusub ee WordPress sii daayo plugin. Tani waa in la sii daayo falfalka in uusan ka mid ah wax isbadalo waaweeyna ama wax la mid aad u groundbreaking. Sidaas awgeed, waxaan ku tuman doonaa in ka badan ChangeLog una sharax warka.
Waxaan ka soo dhoofiyo xoogaa horumar ah in ay ku hartaa fudud html oo u adeegta sida salka inay naga parser ka imanaya dhulka daayo cusub, aan halkan news badan
U ogolow goob of a afka post / bogga leh sanduuqa oo la doortay fudud. Tani ma aha arin ka cusub, maadaama ay tani ayaa laga yaabaa loo maareeyay ee la soo dhaafay aan ku daray Meta tp_language in tiirarkeedii gacanta ku, Si kastaba ha ahaatee waxaa sameeya fududaynayo habka, oo sidoo kale loo hubiyo in turjumo af default waxaa Jeedsaday oo si muujinta dhab shaqayn doona.
Uga dig ku saabsan xaaladaha qaarkood in aynaan hagaajin karo iyo user a waa in ay u badan tahay in laga war hayo. Hadda waxaa jira laba xaalad aan wargelin ku saabsan, kuwaas oo ah kuwa sameeyey inta badan su'aalo taageero si ay u date. Marka hore waxaan ka digaynaa xaaladaha xasuusta hooseeyo, iyo dadka aan ugu baaqeynaa in ay u kordhin lahaayeen xadka xasuusta php (ama loo baddasho adeeg hufan martigeliysay). Digniinta labaad wuxuu ku saabsan yahay la'aanta Beebee ama la mid ah oo sii hagaajin karo waxqabadka u xuub (mar, ugu bedesho martigeliysay fiican!). Digniino The si nabad ah lagu saari karaa adigoo riixaya calaamadda yar X iyo dhinaca kaasi oo xaqiijin doona in aadan arki doontaa digniin kuwa mustaqbalka dhaw.
U ogolow ururinta ee statisics qarsoodiya dul saaran ogolaansho user. Fadlan fadlan noo oggolaan in ay soo ururiyaan xogta! waxaan dhab ahaan doonayaan qaar tirakoobka wax aan waxba tarayn oo kale waxaa socda ku 1 sites zillion oo waxaa la turjumayay bogagga gazillion ah halkii labaad!
Go'an oo xoogaa digniino u yar yar ay soo sheegeen users. No dheer Guda aad la dhaafiyay doono ka dib markii ay ka saareen xayeysiis noo!
Waxa kale oo aynu dib loo eegay ah FAQ page, waxaa laga yaabaa in aan ka fogaano doonaa su'aalaha qaarkood ku cel-, ama noqon doonaa waxaan awoodnaa inaan ku sheegi isticmaala in ay akhriyaan FAQs, waayo,…
Sidoo kale – waxaa hadda ka sahlan tahay abid waa si ay u muujiyaan taageerada aad weligeed ah ee mashruucan adigoo isticmaalaya badhamada bulshada dhinaca, waxa aanu aad lacag la'aan (laga yaabee in ka sokow laga wada badiyay saaxiibadaa, magac iyo ammaan ku facebook) si uun u qaban!
Waxaan rajeyneynaa in aad ku raaxaysato version this, oo wuu diiday (sida had iyo jeer) ku faraxsan yahay in uu akhriyo comments aad.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: 0.7, yaryar, sii daayo
Ma oga ilaa saacado ka dib markii la xariirta aan la 404'ing lahaa bogagga turjumay. Ma u baahan tahay si loo soo dajiyo Beebee thingy in. Ha Laakiin waxaan W3 Total Cache ordaya, waa tan aan sida ugu fiican ee Super Cache?
Thanks sida had iyo jeer.
Waxaan arki karin sabab version cusub doonaynin 404 wax, waxaa inaysan jirin wax isbedel ah oo ay tahay in ay ku dhibta wax degaanka in.
Ku xiridda Beebee hagaajin doono qaab arrin xunna, laakiin tani waa uun digniin, iyo haddii qaab aad wanaagsan tahay ka hor in, Qasab ma aha in aad ku rakibi (aad had iyo jeer lagu caddeyn karaa digniin ah)
ku saabsan cache wadarta w3, waxay ka shaqeeyaan waa in, Si kastaba ha ahaatee transposh marnaba ku daray is-dhexgalka bulshada waxaa si (tusaale ahaan bogga Cache ku dul isbedel turjumaad wax kama jiraan) laga yaabee ee mustaqbalka qaar ka mid ah.
Waxaaba naafada iyo dib-u-curyaamiyaa W3 Total Cache diyaariyaa ah 404 dhibaato, kaas oo bilowday saaka markii aan updated Transposh.
Dhibaato xallin, waqtigii hurdada! Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada.
No 404 ee laakiin u shaqeeyaan? fadlan mar kale u baarto site
Junyerka w3tc script minimizer ka dhigaysa transposh ma shaqeeyaan, waa in aad ka saarto transposh.js ka yaraynta in, Waxaan u baahan doonaa si loo eego in
Updata aragtida ugu dambeeyey, xusay “Waxaan aysan awoodin in ay hesho oo ay taageerayaan in-xasuusta caching engine ah, rakibidda mid hagaajin karaa wax qabadka. ” Maxaa ka khaldan waxaa la? Waa maxay sababta in 0.7.5 waa OK?
0.7.5 lahaa arin isku mid ah, laakiin ma uu karin inuu kuu sheegaayaan, tani waa qayb ka mid ah waxa ay dhab ahaantii ku cusub 0.7.6 – aad in rakibidda sheegaya “oo ay taageerayaan in-xasuusta caching engine” sida Beebee dhab Waa fikrad aad u wanaagsan u Transposh
Waad ku mahadsan tahay in aad pluge. Waxaa suurto gal xusay Magaca Country sida Luqadda English. Anigu ma aan aqoonin magaca dhabta ah ee dalka ku sugan version sida.
Thanks for version cusub ee plugin ah! Way fiicnaan lahayd in la sameeyo si ay u turjumaan article oo dhan ka guddi admin ka, badbaadin lahaa waqti badan u users.
Tani waa wax aan shaqeyn on doonaa…
In file madaxayga ayaan isticmaali soo socda laba nooc heli leben ah:
Horyaalka heli kartaa leben ka turjumo, laakiin Tilmaanta kaliya ka heli mid ka mid asalka ahaa.. Maxaan sameeyaa? Waad ku mahadsan tahay?
Waad ku mahadsan tahay plugin weyn.
kuu sheegaysa in rakibidda ah "oo ay taageerayaan in-xasuusta caching engine" sida Beebee dhab Waa fikrad aad u wanaagsan u Transposh.
Maxaa looga jeedaa Beebee?
Sida loo rakibi.
Sorry inaan aad u yar ogahay, hehe!
Waad ku mahadsan tahay si wax badan aad ka caawisaa!
Sorry for ma jawaaba hore, taasi waa uun digniin, jidaynayey webmasters si loo hagaajiyo kartida site, Beebee waa Cache PHP sare, oo aad Google kartaa pear-Beebee iyo hesho dhammaan tafaasiisha aad abid rabi doonaan, Plugin Transposh u adeegsanayaa si loo hagaajiyo kartida iyo fogaado weydiimo dB markii ay u suurta
Jeelaada macquul in la isticmaalo widget meelaha widget ka duwan marka lagu daro goobaha widget hoose. Iyadoo WordPress Mawduuca Twentyten ilmaha aan leeyihiin hoose, Meelaha widget sare oo ka duwan – la marto Page gaar ah la isticmaalayo oo kaliya meelaha widget duwan. Laakiin mar widget ayaa lagu shubaa widget aasaasiga ah, Waxaan sidoo kale ma gelin karaan si ka duwan goobta widget. : (
Waxaan oggolahay, tani waa calaamada ah in aan la mustaqbalka ku daray.
Boggan waxa uu yahay ee martigalinta la wadaago oo aan hubo in haddii ay suurto gal noqonaysa in la isticmaalo ah op-code ma ihi, waxaana ogaaday tan ugu dambeeyay update in Transposh waxaa warbixinta “In-xasuusta engine caching ma helay” iyo qaar ka mid ah turjumidda hadda waa mid aad u liiteen. Kanu miyaanu ahayn waxaa kale oo ay la isticmaalayo Beebee ama Memcached ee dadka waawayn oo aan iyaga ku rakiban kartaa?
Tani waa gaadhsiin ah, kuwaas oo si joogto ah la saari karaa adigoo riixaya X on wadaago martigelin waxaa jira in yar in la sameeyo laakiin weydiinaya bixiyaha si loo soo dajiyo kasta oo ka mid lagu beddelan karo, waxaa ah ma aan samayn karo in
Donald Shane sheegay
Waxaan hubiyaa la HOSTGATOR, pear-Beebee la siin karaa kaliya ee VPS iyo server ka go'an. Waxba u qaban Shared martigelin. Waxay soo jeedin si loo soo dajiyo WP SUPER kayd. Ma WP cache super plugin waxtar u plugin Transposh?
Haa, waa arrin waxtar leh, meel kala duwan ee caching laakiin sidoo kale horumar ah
In dhamaadka, Waxaan naftayda ku riday isteeshanka xanuun iyo weydiiyay admin ay martida u yihiin si loo soo dajiyo Beebee, oo uu ku sameeyey buuq la'aan, iyo Transposh haatan ma aha oo kaliya balse goobta oo dhan waxaa la socda sida a “rat middi”… aad u fiican! Horumarkan guud ee bogga hore ee waqtiga load goobta uu ka Beebee waa wax cajiib ah in in ay hore u ahayd arrin degdeg ah. Waxaa hadda hoos uga 2.7 ilbiriqsi 1.3 seconds. Iyo Transposh sameynayo ay shaqadaada caadiga ah aad u fiican iyo ciyaaro ay ka qeyb in, ma daahiyaan page wax alla wixii naf dhibkeed, si luqado kale waa uun sida ugu dhakhsaha badan default English ah. Waad mahadsantihiin.
Sidee baan ku dari kartaa “nofollow” badabn si af kasta..
Waa in aad beddesho xeerka in abuuraa links, oo waxaa ku dari nofollow ah, shaqo this waa in utils.php
Sorry, laakiin turjumaan Bing u muuqdaa in aanu ka shaqeeya plugin transposh ah
Waxaa ku shaqeeyaa iyo sida ay ku dareen xad qoondeeyay, aad u baahan tahay si aad u hesho adiga kuu gaar ah AppID iyo bedelo mid ay u muuqataa gudaha naga code for this si flowlessly shaqeeyaan
Oo waxaa halkaas ku sugan code yiil ayaan taagay?
Hi, mahad u plugin cajiibka ah, shaqeeyaa weyn, laakiin waxaan qabaa hal su'aal:
My WP iyo default TP afka ah waa Isbaanish,, tarjumaada inay ganaax ka shaqeeya Ingiriis iyo Jarmal. Haddii (tusaale ahaan) a posts user Jarmalka ee Jarmalka, oo waxaan ku beddelato in gudasho la'aanta Spain, post aanu is turjumay.
Si kastaba ha ahaatee anigu ma u muuqdaan in ay awoodaan in ay gacanta bedeli turjumidda automatic ah ee luqadda sida caadiga ah.
tusaale. http://mysite.com/my-post?edit=1 ma i tusi walxood turjumidda (cagaaran, kuul, pink)
http://mysite.com/de/my-post?edit=1 tusi doonaa bogag transposh ah.
Suuragal u tahay in dib u eegis ku turjumaadaha automatic galay luqada default?
Thanks for fikirradiinna!
Jawaabtu waa haa, marka turjumi in luqadda default waxaa u suurta waa in aad awood u saxaa turjumaadaha noqon, halkan waxa aad ku tijaabin kartaa on this site (Sida comments qaar ka mid ah ayaa posted oo ku qoran luqado kala duwan)
October 12, 2011 at 1:11 at the
mahad badan muddo qaadato inay ka jawaabaan!
Waxaan ahay kaliya aan awoodin in ay saxaa turjumaadaha ee afka default, waxa aan ku hubin kartaa in ay arintaas ka shaqaysiiso?
(The automatic turjumaad tusaale. ka DE in gudasho la'aanta shuqullada ES laakiin natiijo xun)
Waxaan ogaaday in sabab qaar aan si cad ii, on my site ee "data-srclang" eedeeyeen tag taako TP ka maqan. Tusaale. on my site:
<span id="tr_169" class="tr_" data-orig="Geschirrspülmaschine" data-il ="0" data-token="R2VzY2hpcnJzcMO8bG1hc2NoaW5lIHZvbiBXaGlybHBvb2w,">Weelka</taako>
marka la barbar dhigo comment a Spain on this site
<span id="tr_3" class="tr_" data-orig="¿Y en que parte del código lo pongo" data-srclang="es" data-il ="0" data-token="wr9ZIGVuIHF1ZSBwYXJ0ZSBkZWwgY8OzZGlnbyBsbyBwb25nbw,,">Markaasuu, waxa qayb ka mid ah xeerka waa inaan gashan</taako>
Si kastaba ha ahaatee post on my site uu leeyahay beerta Meta post tp_language / caadadii lagu qeexaa "de".
Tan waxaa loo abuuray by plugin mar comment waa la abuuray interface af siiyo, Waa in aan awood fursad u dhigay afka a comment in backend ee versions mustaqbalka.
October 11, 2011 at 3:34 at the
Hi waxaan kuu soo bixin & Terence,
Waxaan ku rakibtay version la soo dhaafay Transposh 0.7.6, oo ay leeyihiin qaar ka mid ah khaladaad:
– Horyaal oo All aan loo tarjumi karaa
– Content iyo qaybaha kale (bedeley ..) mararka qaar waxaa loo turjumay , mararka qaarkood ma yihiin.
– Description & Keywords aan laga sidoo kale loo tarjumay.
– Markii aan riix si Transposh dejinta, waxa ay u muuqataa: “Waxaan aysan awoodin in ay hesho oo ay taageerayaan in-xasuusta caching engine ah, rakibidda mid hagaajin karaa wax qabadka. Hubi Transposh FAQs” . Maxaa ka khaldan? Waxaan la isticmaalayo plugin W3 Total Cache u caching.
Hadda, sidee baan u samayn karaa?
Saar W3 Total Cache iyo rakibi Beebee?
Ku rakib ka weyn version Transposh?
Ama siyaabo kale?
Fadlan ii caawiyaan si ay u xaliyaan dhibaatada tallaabadan ay tallaabo!
Digniintan ayaa dhab ahaan in uu yahay, digniin, aad si ammaan iska dhega tirin karo, ama akhriska iyo ku dul dhaqmaan, ma ka saari W3TC, rakibi Beebee ama memcached haddii aad awoodid, ma hoos…
Taasi waa gargaar ee aan ku siin karaan macluumaadka aad bixisay, nasiib wacan
October 11, 2011 at 7:44 at the
i isticmaali plugin tan 1 sano.
turjumi stop tusaale ahaan 2 labaad tan iyo markii 2 maalmood, haddii aan qoraal u dir ama u furi my site. i waa in ay sugaan 5 daqiiqo iyo waxa ay u tarjumayaan text qaar ka dibna mar kale la joojiyo oo i soo celin
arkay sida turjumi API google qaadan spam aan IP ama API plugin waa jir hadda?
waxaad eegi kartaa waxa fadlan?
mahad, la eego.
Ku rakib firebug, ama isticmaal qalabka Dev chrome, eegto tab network iyo waxaad arki kartaa haddii aad IP laga xannibo, Runtii ma hubin kartaa haddii aad IP laga xannibo…
Ma aqaan sababta aadan, Transposh laakiin ma sii shaqeeyaa on my site… Maxaa la sameeyaa? mahad Cristina
Sorry ah oo ku saabsan reply ee dabayaaqadii, fadlan bedeli file transposh.js aad la mid ah ka this site http://transposh.org/wp-content/plugins/transposh/js/transposh.js
Version A cusub xallin doonto ugu dhakhsaha badan la update caadi ah
…dhammaan hadda, mahadsanid.
…xaqiiqdu waa mid wali ku sugan qaybo ka mid ah goobta (sida in widget guriga) ka [TP no_translate ="iyo"][/TP] uma shaqeeyo!
qalcado Claudio sheegay
ma aha waa ii shaqeysaa naagi… i xitaa isku dayay in ay tirtirto dhan turjumaadaha automatic.. laakiin wasen't in ku filan…
sidaas i tirtiray wax miisaska sql la xiriira transposh iyo meeleeyey.. laakiin waxba.
Marka aan isku dayo inaan turjumi, ka fariisinta bar turjumaad, iyo waxa ku jira ha is turjumay…
Waxa kaliya ee ka shaqeeya, Waa tarjumaadaha manual…
Baad samaysay ka soo horjeedka waxa aad waa u samaysay, si kasta ha ahaatee – waxaa weli u turjumo laakiin Google waa samaynta xadka ah oo aad u adag.
1. Turjumaad Manual
2. Eeg talooyin ku twitter (Xalka sharikadaha)
4. Sug soo socda in la sii daayo taasoo uu xalinayo this
waxaa suurtagal ah in la soo celiyo version hore ka dibna?
i akhri qaybta plugin admin inaan u leedahay in aad weydiisato in aad, isticmaalka furaha shakhsi…
The soo celin celin doonaa turjumaad mashiinka aan kaliya, waxaad si toos ah igu la xiriiri kartaa
Waxaad fadlan ka bixin karta macluumaadka marka version cusub ee plugin diyaar noqon doono.
Hadda Bing iyo Google waxay leedahay siyaasad isbedel iyo turjumaadaha aan shaqada.
Laga soo bilaabo 1-dii December Google ayaa bixin doona version kaliya bixiyo adeegga. Aad plugin u oggolaan doonaa in ay isticmaalaan?
Version cusub ayaa laga heli doonaa ugu dhaqsaha badan, hor inta uusan xirmin google ka.
Bing, hore ayaa ka go'an in ay svn ah, Arin Google noqon doonaa ugu dhaqsaha badan.
Waxaa jira labada Mobile aadan in awood labadaba in ay ku shaqeeyaan version hadda.
Google API la bixiyey waxa la heli doonaa oo keliya haddii uu qof ii siinayaa muhiimka ah si loo baaro, wakiil google ka badan tahay xallin doonto arrinta for kuwa kale oo dhan.
Waxaan rajeynayaa in su'aalo laga jawaabay.